San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၉
ချယ်ရီတွေ တော်တော် လှတာပဲ ။ သူတို့လည်း တစ်နှစ်မှ တစ်ခါဆိုတော့ သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေကြတာနေမယ် ။
ဗုံးသတင်းကတော့ စိတ်ကုန်စရာပါပဲ သူတို့ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့များ လုပ်ရက်ကြတာလဲ ဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ ။
မောင်မျိုး မှာတောင် ၀စ်စာပေါက်ကျန်ခဲံ့တယ်း))))
ကဲ ပေးတစ်ဆင့်...... :)))
လုံးကို စိတ်ဆင်းရဲစေတာပါပဲ...၊စတိတ်မှာဆိုတော့ အစစ
I am so glad to hear that you have gotajob.Congrats!
Everything will be fine after all.
အလုပ်ရသွားတာ ကွန်ကရက်ကျူလေးရှင်းပါ စန်းထွန်းရေ။
အမေရိက က ချယ်ရီတွေလဲ တော်တော်လှတယ်နော်။
အလုပ်ရသွားတာ ကွန်ဂရက်ကျုလေးရှင်း နော့..
ပိတ်ရက်နယူးယောက်ဖက်လည်ရင် သတင်းပို့ အုံးနော်.။
ဒီနေ့ တောင် 9/11 memory သွားလိုက်သေးတယ်၊
Congrats Sun Htun!
စန်းစန်းရေ... Boston ဗုံးပေါက်တုန်းက အမေရိကားမှာရှိတဲ့ ဖဘ ဘလော့ဂါမိတ်ဆွေများနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို ဖျပ်ခနဲသတိရလိုက်သေးတယ် လူသားချင်းမစာမနာ လုပ်ရက်ကြတယ်...
မြင်ရတာကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ချယ်ရီပွဲတော်ကို အခွင့်အခါလေးများပေးရင် ရောက်ချင်ပါ့း)
မဖတ်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက ဖြစ်ကြောင်းရယ်ကုန်စင် ဖတ်သွားပြီး))
congratulations !!!!! I am so glad that you gotanew job. Though you do not konw me, I amaregular reader of your blog and just like you , I have been through all of the steps of job search. At least you gotabunch of good friends. Best of luck....